Medina Sidonia | Vaovao momba ny dia
Sary | Ny faritanin'i Cádiz
Ny hatsaran-tarehy sy ny tantaram-pitiavam-pitiavan'i Cádiz dia mifangaro amin'ny toerana iray: Medina Sidonia, toerana mamakivaky ny Sierra de Cádiz sy ny Ranomasimbe Atlantika izay mandray an-tanana ny mpandeha amin'ny tànana malalaka.
Ny kolontsaina samihafa dia namela ny lovany tamin'ny lova ara-javakanto ara-tantara an'i Medina Sidonia, izay iray amin'ireo tanàna tranainy indrindra any Espana. Tsy misy isalasalana, iray amin'ireo toerana tsara indrindra hahitana any Andalusia.
1 Inona no ho hita any Medina Sidonia
1.1 Andohalambo lehibe sy rindrina
1.2 Lapan'i Medina Sidonia
1.3 Fiangonan'i Santa María la Mayor
1.4 Fiangonana Santiago
1.5 Fiangonana Mandresy
1.7 Tranombakoka Ethnographic
Inona no ho hita any Medina Sidonia
Ny tanàna dia an'ny iray amin'ireo habaka voajanahary manan-danja indrindra ao amin'ny Saikinosy Iberia, ny faritr'i La Janda lagoon, noho ny harena ara-tontolo iainana lehibe. Na izany aza, ny foibe manan-tantara an'i Medina Sidonia dia manan-danja ihany koa ary mahafinaritra ny mahita azy. Sehatra goavambe iray antsoina hoe Site Artistic Artistic Site sy Asset of Cultural Interest tamin'ny taona 2001.
Andohalambo lehibe sy rindrina
Ny rindrin'ny Medina Sidonia dia nanomboka tamin'ny vanim-potoana Silamo - ny Moyen Orient Islamika. Na dia somary nihena aza izy io hatramin'izao, mbola azontsika atao ny mandinika ny firafiny, ny fizarana sasany voafono eo anelanelan'ny trano sy ny hafa midadasika kokoa, izay manamarina ny toerana misy ny Medina Sidonia ao Cádiz.
Ny toerana tena fotogenika eo amin'ny rindrina dia ny tohana sy ny vavahady fidirana mankamin'ny tanàna: ny vavahadin'i Betlehema, ny vavahadin'ny mpiandry ondry ary ny varavaran'ny Masoandro.
Ny vavahady Betlehema no fidirana mankany amin'ny tanàna medieval. Antsoina hoe izy io satria ao amin'ny akany dia misy sarin'i Maria Masina any Betlehema.
Ny vavahady Pastora dia misy andohalambo mitaingina soavaly sy tohatra fidirana lehibe. Izy io dia varavarana Arabo fidirana amin'ny rindrina rindrina. Fantatra amin'ny anarana hoe Puerta de la Salada koa izy io noho ny loharano any amin'ny faran'ny tohatra.
Puerta del Sol dia miatrika atsinanana, ka ny masoandro miposaka eto isa-maraina. Toerana tonga lafatra haka sary mahafinaritra vitsivitsy momba ny dia mankany Medina Sidonia.
Lapan'i Medina Sidonia
Sary | Emilio J. Rodríguez Posada Wikimedia Commons
Izy io dia ny sisa tavela amin'ny trano mimanda taloha izay ampiasain'ny Romana, Silamo ary Kristiana miorina eo an-tampon'ny havoana Castle izay sisa tavela sisa tavela hatramin'ny taonjato faha-XNUMX ka hatramin'ny taonjato faha-XNUMX no nanamboarana azy ho toy ny lapan'ny tanàna ny fiangonana lehibe ao Santa María la Coronada.
Manakaiky ny toerana ihazany, 300 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina, dia misy fomba fijery miavaka an'ireo izay hypnotize. Ny fitsidihana ny lapa Medina Sidonia no fotoana mety indrindra hijerena ny tanàna amin'ny hatsaran-tarehiny rehetra sy ireo sary mahafinaritra manodidina azy. Ny fiakarana avy eo afovoan-tanàna dia tena mahafinaritra ary ny tranonkala arkeolojika mihitsy no namboarina tsara mba handeha eo amin'ireo tavela ara-tantara.
Fiangonan'i Santa María la Mayor
Manakaiky ny Castle misy ny tampon'ny tanàna dia misy ny Fiangonan'i Santa María la Mayor la Coronada, tempolin'i Gothic-Renaissance, miaraka amina planina lakroa latina sy naves telo izay naorina teo amin'ny moske taloha.
Izy io dia manana endrika Herrerian façade miaraka amin'ny fitaomana Andalusian Plateresque tena mahavariana. Na izany aza, ny ao anatiny dia tsy latsa-danja noho izany satria ao anatiny no misy alitara lehibe mampiavaka an'i Plateresque, ny tendron'ny epistily na ny Conception, ny sary sokitra ny Christ of Forgiveness nataon'i Pedro Roldán tamin'ny 1679, ny Custody of the Corpus Christi tamin'ny 1575, ny amboarampeo baroque sy ny alitara rococo.
Izy io dia fiangonana misy drafitra gorodona mahitsizoro, telo naveta ary fomba Mudejar miaraka amina valindrihana mitafo mahavariana vita tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Izy io dia natokana ho an'ny mpiaro ny tanàna sy ny Espanya: Santiago el Mayor.
Samy manana ny fiaviany sy ny fiangonana ankehitriny amin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Ny fiangonana Victoria dia misy naveta telo, tilikambo biriky ary dome lehibe izay voaravaka tamin'ny fotoany. Ao anatiny dia misy sanganasa kanto be dia be tokony ho hita, toy ny sary sokitra roa nataon'i Martínez Montañés sy alitara avo miaraka amin'ny Virgen de la Victoria izay atolotry ny sekoly Pedro de Ribera.
Sary | Michael Gaylard Wikimedia Commons
Ao amin'ny Plaza de España dia manomboka aloha be ny andro ary mifarana amin'ny faran'ny fikatonan'ny orinasany. Io no ivon-tanàna ao afovoan-tanàna ary toerana fihaonana ho an'ny mponina. Eto dia misy bar, trano fisakafoanana ary terraces ahafahanao misotro rehefa avy nandeha tongotra namakivaky ny Medina Sidonia ianao ary nanandrana ny fiainana miadana sy ny atmosfera mahazatra an'ny mponina.
Ankoatr'izay, ao amin'ny Plaza de España no misy ny lapan'ny tanàna. Trano fanaingoana baroque izay misy ny Archive Archive Municipal.
Ny Museum Ethnographic Medina Sidonia dia mijery jery todika ny fotoana ho an'ny fomba amam-panao sy ny fomba fiainan'ny mponina any Assisi amin'ny alalàn'ny fampirantiana feno izay ahitanao ireo zavatra ao an-trano, fitaovana ho an'ny asa eny an-tsaha sy ny asa tanana hatramin'ny fanangonana fanaka fahagola.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Medina Sidonia